Degmada Birqod oo lagu qabtay tabar la Xidhiidha Ilaalinta Deegaanka iyo Aas-aasida Gudiyada Waxsoo-saarka. - Cakaara News
Degmada Birqod oo lagu qabtay tabar la Xidhiidha Ilaalinta Deegaanka iyo Aas-aasida Gudiyada Waxsoo-saarka.
Waxaa lagu Qabtay Magaalada Birqod tababar ay ujeedadiisu ahayd Wacyigalin Bulshada Dhanka ilaalinta Deegaanka iyo waxyaabaha xaalufka iyo nabaadguurka keena sida goynta Dhirta Muhiimaduna tahay in loo aas-aaso Gudiyo ka hawlgala ilaalinta Deegaanka,sidoo kale aas-aasida Gudiyada waxsoo-saarka iyo wacyigalinta.
tababarkan ayaa ay Furitaankiisii ka soo qayb galeen Masuuliyiinta Maamulka Degmada Birqod ee Gobolka Jarar,Qaybaha Shacabka iyo tababartayaashiiba. Furitaanki shirkaas ayaa waxaa hadalo kooban oo dhinacyo badan taabanaya ka soo jeediyay Gudoomiyaha Degmada Burqod Mudane Cabdirisaq Maxamed oo ugu baaqay bulshada ka soo qayb gashay Qaadashada tababarkaas in ay si wayn uga faa’idaystaan tababarkaasi si ay u hirgaliyaan hadafka iyo u jeedooyinka laga leeyahay Birqod.
Madax-xafiseedka xoolaha beeraha iyo horumarinta reer miyiga ee dagmada birqod Mudane Wali Cabdulaahi ayaa sidoo kale madashaasi hadalo kooban ka soo jediyay kasoo shegey in tababarkan halkaas lagu siiyay aysan halkaa ku daynine ay uga sii fa’ideyaan meelihii ay ka kala yimadeen ilaa iyo heer qabalee. Sidoo kale qaar kamid ah bulshada iyagu qatay tababarkaasi ayaa madasha ka balan qaaday in tababarka ay qateen ay hirgalinayaan si loo gaadho yoolka iyo himiloyinka horumarineed ee looga gol lahaa ilaaalinta Deegaankana Door fiican ka qaadan doonaan.
tababarkan oo qayb wayn ka ah mashruuca DRSka ee Degmadaasi Birqod waxaana lagu doonayaa sidi bulshada qaybaheda kala duwan e degaankaasi looga qayb galin lahaa horumarka sida habsamida ah uga socda guud ahaan deeganka Gaar ahaana Degmada Birqod taasoo Qaybaha Bulshada Deegaankan Fursado shaqo iyo Xirfad ay ku shaqaystaan loo abuurayo.
Dagmada Birqod oo ka tirsan dagmooyinka hoos-yimaada Maamulka Gobalka Jarar ayaa qiyasti u jirta xarunta degaanka soomalida itobiya in ka badan 250KM waxayna kamid ahayd 10ki dagmo ee Sanadkii Tegay baarlamaanka DDSI ku ansixiyay kalfashiyadiisi mid ka mida ah.